एकसाथ प्रधानमन्त्री ओलीमाथि खनिए प्रचण्ड र देउवा, प्रधानमन्त्रीमाथि यतिठुलो आ*रोप ! (भिडियो हेर्नुहोस्) - Nepali in Australia
एकसाथ प्रधानमन्त्री ओलीमाथि खनिए प्रचण्ड र देउवा, प्रधानमन्त्रीमाथि यतिठुलो आ*रोप ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
May 10, 2021 autherLeaveaComment on एकसाथ प्रधानमन्त्री ओलीमाथि खनिए प्रचण्ड र देउवा, प्रधानमन्त्रीमाथि यतिठुलो आ*रोप ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रधानमन्‍त्री केपी ओली संसद्‌बाट विश्‍वासको मत लिन असफल भएका छन्। विश्‍वासको मतका लागि ओलीले राखेको प्रस्तावउपर प्रतिधिनिसभाको सोमबारको बैठकमा भएको मतदानमा उनी विश्‍वास प्राप्त गर्न असफल भएका हुन्।
प्रधानमन्‍त्री ओलीले विश्‍वासको मत नपाएको घोषणा सभामुख अग्‍नी सापकोटाले गरेका हुन्। विश्‍वास प्राप्त गर्न ओलीलाई १३६ मत आवश्यक थियो। तर ओलीले जम्मा ९३ मत पाएका छन्। उनको विपक्षमा १२४ मत परेको छ। त्यस्तै मत दिन्‍न भन्‍ने वा तटस्थमा १५ मत परेको छ। संसदमा जम्मा २३२ सांसद उपस्थित थिए।
प्रधानमन्‍त्री ओलीले विश्‍वासको मत नपाएको जानकारी सभामुख अग्‍नी सापकोटाले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई दिनेछन्। संसद्‌बाट विश्‍वासको मत नपाएपछि ओलीले अब राजीनामा दिनुपर्नेछ। उनलाई काम चलाउ प्रधानमन्‍त्री तोकेर राष्ट्रपतिले संसदभित्रबाटै बहुमतको सरकार बनाउन दलहरूलाई आव्हान गर्नेछिन्। कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर वैकल्पिक सरकार गृहकार्यमा लागेका छन्। बहुमतको आधारसहित आजै उनीहरूले राष्ट्रपतिकहाँ जाने तयारी छ।
May 9, 2021 May 9, 2021 auther